मेरो मुटु चोरीयो भन्दै जव एक युवक प्रहरी कार्यालय पुगे…. « Light Nepal
मेरो मुटु चोरीयो भन्दै जव एक युवक प्रहरी कार्यालय पुगे….
Published On : 10 January, 2019 4:01 pm
काठमाडौं । गरगहना, पैसा तथा मोटरसाइकल चोरी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेको त तपाईँहरुले सुन्नुभएकै छ होला । कतिपयले त आफ्नै सामान चोरी भएको उजुरी पनि टिपाइसक्नुभएको होला । तर कसैले आफ्नो मुटु चोरी भएको उजुरी टिपाएको समाचार सुन्दा तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ ।
एउटी युवती आफ्नो मुटु चोरी गरेर भागेकी र चोरी भएको मुटु प्रहरीले खोजेर ल्याइदिनुपर्ने भन्दै उजुरी दर्ता गर्न ती युवा प्रहरी चौकी आइपुगेका थिए ।चोरी भएका सामानहरु फिर्ता ल्याइदिने भनेर उजुरी आउनु त प्रहरीमा सामान्य नै हो । तर मुटु नै चोरी भएको उजुरी आएपछि ड्यूटीमा खटिएका प्रहरीले यो विषयमा के गर्ने भनेर माथिल्लो तहका अधिकारीसँग सम्पर्क गरेका थिए ।
त्यहाँका एकजना उच्च अधिकारीले बताएअनुसार, यो घटना नागपुरको एक प्रहरी चौकीमा भएको थियो । ती युवाले प्रहरी अधिकारीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै यो समस्याको समाधान गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले यस्तो प्रकारको मुद्धाको विषयमा भारतीय कानुनमा कुनै पनि प्रावधान नभएको भन्दै ती युवालाई घर फर्केर जान आग्रह गरेका थिए ।
पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘चोरी गरिएका सामानहरु त हामीले फेला पारेर फिर्ता गर्न सक्छौँ तर कहिलेकाहीँ भने हामीकहाँ यस्ता उजुरी पनि आउने गर्छन्, जसलाई समाधान गर्नै सकिँदैन ।’ एनडिटिभी
सुत्केरीको मृत्यु भएपछि सेती अञ्चल अस्पतालमा तनाव
धनगढी, ८ चैत । सेती अञ्चल अस्पतालमा सुत्केरीको मृत्यु भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ ।